84- Sifadii Rasuulka scw
Sidoo kale Caa'isha markii la waydiiyey waxa ay tiri: "dabeecadiisu waxa ay ahayd qur'aanka". Rasuulka SCW dabeecaddiisii iyo akhlaaqdiisii wanaagsanayd waxaa noogu filan siiradiisa, aad ayuuna ugu wanaagsanaa dhinac walba hadday noqoto tawaaduciisii, xishoodkiisii, runtiisii, ammaanadiisii, suhdigiisii, ikhlaaskiisii, naxariistiisii, fahamkiisii, caqligiisii, geesinimadiisii, qiiradiisii u jilicsanaantii dadka muslimiiinta ah iyo ku ad adkaantiisii caniidiinta xaqa ka hor yimid.
Wuxuu ahaa Rasuulku SCW nin Alle ka doortay bani aadamka oo dhan, oo uu ka dahiray nusqaan kulligeed.
XUSUUSIN: "Dhamaan inta casharkan ku xiran ama jecel in ay bartaan Siirada Xabiibkeenna Maxammad SCW, ha isku dayaan in ay bartaan oo ku daydaan wuxuu isuga samayn jirey. Yeyna inta ay aqriyaan faraha ka qaadin ee ku dayda isaga qofkii kaloo aad uga sheekayn kartidna u sheeg.
"OsmanBillad. Walaalkiin aad ku walaalowdeed Islaamka